Turkish Airlines Dreamliner yeNew Generation Bhizinesi Class | RayHaber
mushaTURKEYCentral Anatolia Region06 AnkaraTurkish Airlines Dreamliner yeNew Generation Bhizinesi Kirasi
02 / 12 / 2019 06 Ankara, Central Anatolia Region, GENERAL, Airports, HIGHWAY, musoro wenyaya, TURKEY, VIDEO
Turkish Airlines Dreamliner yeNew Generation Bhizinesi Kirasi; Boeing 787-9 ine hurefu, mapatya enjini uye yakafara muviri unozivikanwa seDoorliner. Nekuda kweiyo yakakwira composite yezvinhu, iyo ndege ine yakakwira humidity yemukati uye inopa yakagadzikana kutasva kusvika kumagumo. Iwe uchaona kuti iyo Boeing 787-9 ine mahwindo akakura kupfuura mamwe mapasire ndege uye iwe uchanzwa kutsva kwenzvimbo. Iwe unogona kuzorora zvakanaka muzvigaro muBusiness Class kabhini, iyo inogona kushandurwa kuve yakanyatsogadzika mubhedha uine imwe nzvimbo yakawandisa.
Takagadziridza chechizvarwa chedu chitsva cheredhiyo Boeing 787-9 ndege kuti ikushandire zviri nani. Isu takanangidzira kuti rwendo rwako ruwedzere kunakidza nekugadzira kwedu zvigaro, nzvimbo dzakafara zvigaro, mashandiro anounza mukana wekushandisa kumabhokisi ari pamusoro, makiyi ekuchengeterwa nzvimbo, madoko eUSP uye mapulagi. Mukuwedzera, isu takagadzira dhizaini inonakidza pameso ako nemadheti anoenderana neye yedu chiratidzo chitupa Flow-Flow uzivi.
Kuve Bhizinesi Kirasi mufambi paDorlinliner chiitiko chakasiyana
Iwe uchave wakasununguka nekutenda kune 1 cm ibvi remabvi rinopihwa ne2-1-111 zvigaro muBusiness Class kabhini. Iwe unogona zvakare kushandura chigaro chako mumubhedha we193 masendimita-refu uine rimwechete rodha. Iyo 18-inch inoratidzira inokukoka iwe kune rwendo runofadza neakanakisa mafirimu, nhepfenyuro uye mimhanzi.
Iyo Bhizinesi Kirasi inoratidza kunyange yakanakisa madhiraizi senge yekubata bata, inogadziriswa mwenje kusimba kuverenga, nzvimbo yekuchengetedza nevharo, simba yeyuniti uye USB kuchaja madoko. Tinokukoka ku rwendo runoshamisa na özel Sunrise muKappadocia ”kuvhenekera kwakarongedzerwa kabati
Boeing 787-9 inovimbisa rwendo rwunosangana nezvaunotarisira
Gadzirira kukwira kwakasununguka pa3 cm yakakura zvigaro, izvo zvakanyorwa muEconomy Class kabhu se3-3-44. Isu takasanganisira 78 cm bvi remabvi pakati peEconomy Class zvigaro kufamba zvakanaka sezvaunoda. Taida kuti iwe ufambe uchifara muEconomy Class kabhini uko isu tinowedzera ruvara ne ıyla Turquoise Waves ”mwenje.
Iyo Boeing 787-9 ine mahwindo mahombe mukirasi yayo uye inowedzera rwendo.
Zvigaro zviri muBusiness Class kabhini zvinogona kushandurwa kuve yakasununguka uye yakasununguka mubhedha nekuda kwenzvimbo dzakachengetedzeka zvakanyanya.
Special zvigaro zvigaro
Chigadzirwa chedu chinokwira kuseri kwechigaro cheAurora ız chakafanana nekubuda kwezuva. Zvigaro zvedu zvichangobva kugadzirwa zvakapamhama zvinopa nzvimbo yakakosha kune vedu vanofamba.
Turkish Airlines Science Expo Inotanga Nokubatana Kwakasimba
Turkish Cargo Kugadzirira Imba Idzva
Zvitsva zvitsva zvinotakura zvigaro munguva itsva kubva TÜDEMSAŞ
Mhinduro mu UTİKAD-Turkish Cargo Workshop yaiva muGündem
New Generation National Wagon Yakareruka Kupfuura Vezera Rayo…
Chizvarwa chitsva chechina chinoita magnetic train inouya nokukurumidza pamusika
New Generation Trams Shumira muMoscow
New Generation National mitoro engoro Turkey, uye BTK-European ...
Nhasi Munhoroondo: 23 Kurume 2017 na TUDEMSAS…
Azerbaijan Railways New Yakagadzirwa naTUDEMSAS…
Rudzi Rutsva Kutakura Kwevanhu Vakawanda kubva Kayseri
GATX Company Inotsvaga Mitsva Yekutengeswa KweNyika Yese yeTÜDEMSAŞ
New Generation Engine inofanira kubudiswa neHurumende Inokurudzira